Usetyenziso gwenxa kotywala ngumbulali weliphondo leMpuma Koloni | Ilisolezwe
Usetyenziso gwenxa kotywala ngumbulali weliphondo leMpuma Koloni
Iindaba / 19 May 2017, 11:27am / Mabini Mpuhlu
Iqumrhu elijongene nokusetyenziswa gwenxa kotywala lidibene neNyandeni Municipality, baphume ngendlu beyokunikeza imfundiso ngokuzikhathalela kubafundi.
Kanye ngethuba apho indlu yowiso mthetho isenza iinzame zokunkinkisha imigaqo yokuthengiswa kotywala, eli qumru phantsi kwesetyana lezentlalo iSocial Accountability - lizithwelise uxanduva lokufikelela emaphandleni ngelihlelo lokunika ulwazi ngobungozi bokuzinkxinkxa ngotywala ebuncinaneni.
Izolo umhla we-18 kule kaCanzibe, i-Eastern Cape Liqour Board ekhokelwe nguMnu Mgwebi Msiya, ithe yamemela amashumi amabini ezikolo ezirhangqe umasipala ombaxa weOR Tambo, izimemela kukhuphiswano olunemfundiso olungobungozi bentselo yabafundi nolutsha.
Umnyhadala ubuzinyaswe ngabathathi-nxaxheba abaliqela kuquka isebe lezoPhuhliso loQoqosho, iMicimbi yezeNdalo noKhenketho (Economic Development, Environmental Affairs and Tourism), uMasipala weNyandeni, isebe lezorhwebo (DTI) kunye nabakwantsasana abasebenza kakhulu neli qumrhu.
Owona myalezo obuthunyelwa ngowokulumkisa ulutsha ngokuzinkxikxa ngotywala okudodobalisa iphondo lethu nokukhokelela kwinkitha yeengxaki eziquka ulwaphulo-mthetho nokufa ngaphambi kwexesha.
Amaqela ezikolo athe angenela ukhuphiswano lwengxoxo-mpikiswano oluthe lwaphunyelelwa sisikolo iSt Patrics kunye nomdlalo weqonga ophunyelelwe yiNdamase Senior Secondary School efumane ibhaso lokuqala.
I-St Patrics ibixoxa kwisihloko esithi 'zintoni ezithuma ulutsha etywaleni', apho bebenoxanduva lokuzidwelisa, ngaxeshanye beze neengcebiso zokunciphisa lo mkhwa.
Uphefumle wathi uMnu uMsiya, "Kukho isidingo sokuba abantu abasemaphandleni bafundiswe ngemiba equka ubungozi bokuthuma abantwana kwiindawo zentselo, ukuselela phambi kwabo emakhaya kunye nokungabakhalimeli kwizenzo ezingabathuma.
Asinanjongo zokuthi abantwana mabohlukane notywala ngexesha lokufunda, kodwa sineenjongo zokuncothula neengcambu oku".
Wongeze ngelithi, "Kwidabi lokunciphisa ukungakhathali koluntu, saye sanikeza ngomnxeba osimahla wokuxela ukuthengiswa gwenxa kotywala, yiyo lo nto siye sifumane iminxeba evela eluntwini kuxelwa abathengisi abathengisa bengenampepha, nabo bathengisela abantu abangaphantsi kweminyaka eyamkelekileyo.
Ngaxeshanye sikhuthaza ukonyuswa kweminyaka eyamkelekileyo yokuthengiselwa kolutsha ukusuka kwishumi elinesithoba ukuya kumashumi amabini ananye".
Abahlali baseLibode bebephume ngobuninzi beyokuzimasa lo msitho kwiholo iLibode Community Hall eginya ikhulu elimashumi asixhenxe, kodwa bakhwela kumakhulu amathathu abazimasi.
"Nangona sayikhupha le nombolo isimahla, abahlali abaninzi abaziva bekhululekile ngokuza ngaphambili baxele ezi zenzo zenzeka phambi kwamehlo abo," likhale latsho eli qumrhu.
OkaMsiya uthembise ngelithi bakwiphulo lokuqhubekeka behambisa le mfundiso ngokusebenzisa amaqonga emidlalo neengxoxo mpikiswano eziqhutywa ngolwimi lwesiXhosa.